Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ethiopian Airlines na Liege Airport gbatịrị nkwekọrịta mmekọrịta
Airlines • Airport • Akụkọ kacha ọhụrụ na Belgium • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Liege Airport, ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ ibu kasị ukwuu na Belgium na ọdụ ụgbọ mmiri nke isii na-ebu ibu na Europe, ga-anọgide na-abụ ọdụ ụgbọ ibu nke Etiopia na-eje ozi dị ka ọnụ ụzọ ụgbọ mmiri na-ebu ibu n'etiti Africa na Europe maka afọ ise na-esote.
Airlineslọ ọrụ ụgbọ elu nke Etiopia na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ ọrụ na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Liege maka ọrụ ụgbọ mmiri ya n'etiti Africa na Europe.
Na mmekorita ya na ọdụ ụgbọ elu Liege, Etiopia Cargo na lọjistik Ọrụ na-enye ọrụ njem ụgbọ njem ọsọ ọsọ ma dị nchebe gafee Europe na gafere afọ 15.
N'ọdịnihu, enwere ike ịtọbe ụlọ ọrụ raara onwe ya nye na Liege North, nke onye Etiopia bụ onye ahịa mbido ịmalite.
Ọrụ ụgbọ elu nke ndị ụgbọelu nke Etiopia na Liege n'ọdụ ụgbọ elu ekwuputala na ha emeela nkwekọrịta nkwekọrịta ha ogologo oge ruo mgbe 2026. Liege Airport, ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ mmiri kasị ukwuu na Belgium na ọdụ ụgbọ elu nke isii na Europe, ga-anọgide na-abụ ọdụ ụgbọ ibu nke Etiopia na-arụ ọrụ dị ka ọnụ ụzọ ụgbọ mmiri na-ebu ibu n'etiti Africa na Europe maka esote afọ ise. Ndị ọrụ ụgbọelu nke Etiopia na-ahụ maka ụgbọ na ndị ọrụ lọjistik, onye na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ibu ibu n'Africa, na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Liege maka ọrụ ya na-ebu ibu n'etiti Africa na Europe.
Airlinesgbọ njem ụgbọ elu nke Etiopia na Ọrụ Lọjistik Onye isi nchịkwa na-ahụ maka njikwa, Maazị Enquanhone Minyashal kwuru, “Obi dị anyị ụtọ na anyị emegharịla nkwekọrịta mmekọrịta anyị na ọdụ ụgbọ elu anyị nọrọ ogologo oge mgbe anyị na-edebanye aha nnukwu ibu na ebe anyị na-ebu ibu na ikike. Na mmekorita ya na ọdụ ụgbọ elu Liege, Etiopia Cargo na lọjistik Ọrụ na-enye ọrụ njem ụgbọ njem ọsọ ọsọ ma dịkwa nchebe gafee Europe na gafere afọ 15 gara aga nke imekọ ihe ọnụ na-aga nke ọma. N'ime afọ ise sochirinụ, anyị ga-arụ ọrụ ịgbanwe ọrụ ụgbọ mmiri anyị iji jeere Europe ozi nke ọma site na ntinyeghachi anyị na ọdụ ụgbọ elu Liege. Dị ka onye ọkwọ ụgbọ mmiri kasị ukwuu n'Africa, ọdụ ụgbọ elu Ethiopian ga-aga n'ihu na-eme ka mmekọrịta ya na ọdụ ụgbọ elu Liege sikwuo ike iji bulie ọrụ ụgbọ mmiri ya n'etiti Africa na Europe.
Steven Verhasselt, VP Commercial of Liege Airport kwuru sị “Nke mbụ, ọdụ ụgbọ elu Liege chọrọ ikelele ọdụ ụgbọ elu nke Etiopia na ndị ọrụ ya niile na ndị mmekọ ya nwere afọ ojuju ụbọchị iri asaa na ise. Obi dị anyị ezigbo ụtọ na anyị bụ akụkụ nke akụkọ ihe ịga nke ọma nke Etiopia ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 75 na LGG ga-anọgide na-abụ ọdụ ụgbọelu nke Etiopia na Europe. N’ileghachi anya azụ site na mbido rue ebe anyị nọ taa, onye Etiopia arụworị ụgbọ elu ụgbọ elu 15 na LGG, na-erute nde 15,000 nde nke ibu ebu. N'agbanyeghị nke ahụ, Steven Verhasselt gosipụtara, nke a bụ oge gara aga ma enwere ike iwere dịka mmalite dị oke mma. Taa, anyị na-eme ememme ọdịnihu.
Etiopia na LGG emegharịrị nkwekọrịta mmekọrịta ha na ọ bụghị naanị na-egosi na European Cargo hub na LGG maka afọ 5 sochirinụ kamakwa na-ekwu na Etiopia ga-abụ ihe karịrị ụgbọ elu na-efe LGG. N'ọdịnihu, enwere ike ịtọbe ụlọ ọrụ raara onwe ya nye na Liege North, nke onye Etiopia bụ onye ahịa mbido ịmalite. Anyị na-ele anya maka nzọụkwụ ọzọ a ga - enyere ndị Etiopia aka ijere ndị ahịa ya ọfụma. Karịa mgbe ọ bụla, LGG ga-abụ ọdụ maka Etiopia na nnukwu ụzọ mbata ụgbọ ala n'etiti Africa na Europe. ”
Dika akuko nke African Airlines Association (AFRAA) si kwuo, Etiopia bu ndi mbu site na ndi njem na ebu ahia na 2020. Etiopia buuru puku mbu ahia 500 na nde mmadu 5.5 site na isi ulo oru ya, Addis Ababa Bole International Airport.